Efa manana ny sary iFixit an'ny iPad Pro | Vaovao IPhone
Vao avy nampiditra ireo maodely iPad Pro vaovao i Apple amin'ity taona 2018 ity, ny iPad Pro 11-inch ary ny iPad Pro 12,9-inch. Samy miaraka amina endrika vaovao misy zana-kazo vitsy kokoa, FaceID, LCD misy zorony miolaka sy USB-C.
Mazava ho azy, tsy ela akory dia mivarotra izany mandra-pahatongantsika manomboka mahita ireo fiheverana hafahafa indrindra sy fitsapana ireo fitaovana Apple. Fa, raha misy iray izay antenaintsika rehetra, dia ny fomba fijery mipoapoaka ataon'ireo bandy ao amin'ny iFixit.
Tanjona foana ny hahitana ny fahatsorana na ny fahasarotan'ny fanamboarana ireo fitaovana ireo, IFixit dia manala ireo fitaovana Apple vaovao rehetra ary efa nanao toy izany tamin'ny iPad Pro 11-inch izy ireo.
Ny iPad Pro Pro 11-inch, raha ny marina, dia manana isa ambony azo hanamboarana iFixit noho ny maodely taloha., ny iPad Pro 10,5-inch ary ny iPad Pro voalohany. Na izany aza, iPads dia fitaovana sarotra be hanamboarana ny tenanao, ary amin'ity tranga ity dia miakatra hatramin'ny 2 ka hatramin'ny 3 ny isa, izay mbola midika fa sarotra ny manamboatra ny tenanao.
isa tsara iFixit ho an'ny mpampitohy USB-C vaovao, izay azo soloina mora foana. Ary koa ny tsy fisian'ny bokotra Home izay azo tapaka.
Ny toerana malemy dia ny lakaoly rehetra ampiasaina amin'ny singa rehetra, na dia ao amin'ny bateria izay, ho fanampin'izany, dia misy visy mifatotra.
Ny efijery, iray amin'ireo lafiny marefo indrindra amin'ny iPad, manana ny tontonana LCD sy ny vera nopetahana, izay midika hoe manova ny zava-drehetra na dia vera fotsiny aza no vaky. Mampiakatra ny vidin'ny fanamboarana izany.
Izy ireo koa dia nanala ny Apple Pencil (izay rehetra azonao atao, farafaharatsiny) miaraka amin'ny lelan'ny ultrasonic.
Raha tianao dia afaka mahita ny sary rehetra sy ny fomba fijery nipoaka ianao amin'ity pejy iFixit ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Efa manana ny sary iFixit an'ny iPad Pro vaovao izahay
Stickers Packs dia mitondra ny sticker Telegram mivantana any amin'ny WhatsApp
Horizon Chase - World Tour, lalao ankehitriny sy Retro miaraka amin'izay